Tupu ịzụta ihe ndozi ihe osise
Ihe omume ntụrụndụ na ihe omume Ihe nrụpụta ihe
Ihe niile ịmara tupu ịzụta ihe nrụpụta ihe osise
Ot'u esi emefu ego gi nke oma
Akụrụngwa bụ ụdị agba a rụrụ site na sistem sịntetị dịka onye na-ajụ ihe na-eme ka pigmenti-otu pigmenti dị ka eji eji mmanụ. Ha nwere ike na-agba ọchịchịrị ka ha kpọrọ nkụ, n'adịghị ka mmanụ. Ma acrylics nwere uru nke ihicha ngwa ngwa karịa mmanụ, dịka o nwere ike were ụbọchị ma ọ bụ ọbụna izu maka mmanụ na-agbanye, dabere na iru mmiri na okpomọkụ. Akụrụngwa bụkwa mmiri a sụgharịrị maka nchacha dị ọcha, dị ka mmanụ si achọ mmụọ ma ọ bụ ihe ndị dị na ya, ma dị ọnụ ala karịa mmanụ.
A na-ahụ ihe osise dị iche iche ma ụmụ akwụkwọ ma ndị ọkachamara. Ọ ka mma ịzụta àgwà ndị kachasị mma na ma eleghi anya nke abụọ agba karịa ụdị dị iche iche nke ọnụ ala dị ala. O yikarịrị ka ndị na-amụ akwụkwọ ga-agbaghara agba ha karịa oge. Ịzụta obere ego iji hụ na ịchọrọ àgwà àgwà ahụ tupu ịzụta ọtụtụ agba. Ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-eme ka ọkachamara acrylics dị ka iridescent, fluorescent, na ewute.
Ọkara Ngwá Ọrụ
A na-agbakwunye agbada na acrylics iji gbanwee agba nke agba (iji mee ka ọ dịkwuo ka ọ na-egosi akara akara ma ọ bụ nchara maka nhicha) ma gwụchaa (matte ma ọ bụ gloss), iji mee ka oge wepụ oge iji gbakwunye ihe ederede, na iji zere ntụgharị. Ọ bụrụ na ị gbakwunye mmiri dị ukwuu na agba agba, enwere ike ịgigharị ịzigharị ahụ, ị ​​ga-ejikwa obere eserese.
A na-eji akwa peeji a na-asa akwa ma ọ bụ tinye ya n'ọrụ.
Jiri brushes dị nro ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ọnụ ala karịa maka nhicha ebe ị na-achọghị akara egosiputa. Jiri polyester brushes mere maka maka acrylics maka agba agba. Gbalịa brushes na mkpịsị aka dị ogologo ma dị mkpirikpi iji hụ nke ịchọrọ. Ụdị isi akpụkpọ ụkwụ dị iche iche mepụtara mmetụta dị iche iche, ya mere, ọtụtụ mkpọ nwere ike inyere gị aka ịmalite.
Na-echeta mgbe niile ka ị kpochapụ brushes gị ngwa ngwa, dị ka agba chara acha na isi nchara nwere ike imebi ahịhịa. Egwuregwu ndị na-egwu egwu anaghị efu ọnụ kama ha ga-eji nlezianya elekọta ọtụtụ afọ. Inwe mma palette nwere ike inyere aka n'ịgwakọta agba gị, na mkpịsị a ga-enye gị ohere ịme ezigbo ntụpọ na isi.
A na-eji osisi paịlị ma ọ bụ plastic palettes mee ihe maka acrylics, ma ọ na-esiri ike ịnweta ihe niile a kpụchara achacha. Ihe mkpofu ihe mkpofu ihe mkpofu nke ị na-akwapụ n'elu akwụkwọ ma tụfuo ya-dozie nsogbu a. Ọ bụrụ na ịchọta agba na-agbapụ ngwa ngwa, gbalịa ịmepụta palette iji dochie agba a : agba na-anọdụ n'elu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ debere n'elu mpempe akwụkwọ mmiricoco ma ọ bụ sponge, iji mee ka peeji ghara ihichapụ dị ka ngwa ngwa dịka ọ ga-esi na palette akọrọ.
Varnish na-echebe eserese si na unyi na mmetọ na ikuku. Ihe ogwu eji eme ihe na eserese bu ihe mbughari, ya mere enwere ike kpochapu ihe osise a ma oburu na varnish onwe ya ruru unyi. Ọdịdị dị na gloss ma ọ bụ matte. I nwere ike ijikọta abụọ iji nweta ọkwa dị mma. Gbaa mbọ hụ na eserese gị dịchaa tupu i kpochaa ya.
Ụlọ ahịa kachasị mma na London
Okwu Mmalite nke Art Peeji
Sennelier Akwụkwọ nri ndị ọzọ
Mkpịsị Nkọwa Na-enweghị Atụ
Ihe niile banyere mmanụ ọcha na ngwaahịa Artists 'peint
Kedu ihe mere eji eji mmanụ aṅụ eme ihe na (ụfọdụ) na-acha akwụkwọ mmiricoco?
Nlekọta ndenye ederede kachasị elu
Akwụkwọ ntanye na ntanye nke Derwent
Ihe Ndepụta Mpempe mmanụ
Mpempe mmanụ: Ihe nkwụsị na resin
Ihe I Kwesịrị Ịmara Ijiji Na-ese Ihe
Nke anọ na nke anọ
Kedu Ka Ị Maara Mgbe Emezuru Ngosipụta?
Geography nke Honduras
Nduzi maka "ihe efu" na mmemme Kọmputa
Otú a na-akpọ Mao Zedong
Ndị na-agụ akwụkwọ: Ihe Ị Kwesịrị Ịma Banyere Kọlọtọ Na-emepụta Ihe
Mkpụrụ Na-ahụ Maka Mmụọ nke Nnụnụ Na-akpọku Na Nhi
North na Top nke Map
Azu uzo uzo
Kedu ihe ga-abụ Market Market?
Mkpochapụ nke Cholula
Nzukọ Annapolis nke 1786
10 Nkwupụta Nkwupụta nke Ụlọ Akwụkwọ Iwu nke Iwu
Dewa mata - Ụdị okwu Japanese dị mfe
50 Ndenye ngwa ngwa na-akwalite maka akwụkwọ, Blogs, Fiction, na Essays
Obere ihe egwu egwu
Nkwenye nke Rolling Two Dice
5 Ntụziaka nke Snow Ice Cream
Ihe egwu dị egwu nke egwu
Ntuziaka nke Onye Amalite na Okwu Nkwupụta
Onyinye Onyinye maka Ndị Artists: Onyinye ego na obere onyinye onyinye
Nchịkọta Ọchịchị Nchịkwa Free Online
Jenụwarị Na-ede Ihe